ပတ်မက ဗေထိ ဗေထိ(ထီ)။ နေဝင်ချိန် တိမ်အကျမှာ ပွဲစလေပြီ။ ဘုရားရှေ့ ရင်ပြင်ဆီ စည်ပါပေ့လူတန်း။ အောက်လင်းရယ်မြိုင်မြိုင်နှင့် ရေနံတိုင် မင်အခိုးမှာ မိုးထိဘနန်း။ ငချိတ်ပေါင်း ကောက်ဦးပေါ်။ ငှက်ပျောချို စလူထုပ်နှင့် ပဲငုတ် တုတ်ဖော်။ ငါးကျည်းပေါက် ငါးခူကြော် နှမ်းလှော်ထောင်း ပျံ့သင်း။ ပွဲစျေးမှာ လူစည်ခိုက် အရီးချည်ဗန်းကိုချကာ ရောင်းရလေခြင်း။ အထက်မီးအောက်မီးနှင့် အိုးကင်းကြီးဖိုခွင်မှာ။ အုန်းအလွှာနှမ်းလှော်ဖြူးနှင့် တူးနံ့နဲ့ပါ။ "ရန်ကြီးအောင်" "ပြည်တော်သာ" ဘိန်းမုံ့ပါဝယ်ကြ။ အမည်မည်အော်လို့ရောင်းတယ် ကောင်းလှပေစွ။ ဆိုင်းမပြင် ဖျာမခင်းနှင့် မုံ့အိုးကင်းသူမပါ။ အပူရှိန်ထိန်ထိန်ညီးတယ် မီးပုံလို့သာ။ ဗယ်တလှည့် ညာတခါ မီးလျှံမှာကင်ရ။ မုံ့လေပွေသူအပြန့် သင်းနံ့ချိုမြ။ မုံ့လေပွေအမယ်ကြီး မီးတောက်လို့သူမပူ။ လက်ဗယ်ညာပြန်ကာလှုပ်ခိုက် ဝမ်းကြုတ်ကြုတ်ဆူ။ မီးလျှံကပူ ပူပေမင့်လေး။ ဝမ်းရေးကဆူ ဆူပေထင့်လေး။ ဇရာအို မျက်ထားရှင်မချိုနှင့် ထွာတညိုဝမ်းကိုကျောင်းရှာရ ကြောင့်ကျမအေး။ ။ နုယဉ်ရေးတဲ့ကဗျာမှာ ဗယ်တလှည့် ညာတခါ၊ ထွာတညို။ အဲဒါတွေကို စသတ်နေလို့ကတော့ မုံ့ကောင်းစားရမယ်မထင်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁-၉-၂၀၁၉
ပါးစပ် ပစပ် ဘယ်စာလုံးကမှန်ပါသလဲ။ ပါးစပ်ကသာ စံကိုက်သတ်ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံအတွက် ကျေးဇူး။ ဦးသာမြတ်သတ်ပုံကျမ်းမှာတော့ ပစပ် (ပါးစပ်) လို့ ထည့်ပေးထာတယ်။ တခြားသတ်ပုံစာအုပ်တွေမှာ ပစပ်လို့ မတွေ့မိသေးပါ။ သူတပါး မှန်။ တစုံတရာ မှန်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၁-၉-၂၀၂၀
Scalp Fungus ဆံပင်မှို
၁။ ဆရာရှင့် ဆယ်နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးပါရှင့် အစကသေးသေးလေးကနေအဲ့ဒီလောက်ကြီးလာပြီးဆံပင်မပေါက်ပါရှင့် ဆေးနည်းလေး ညွှန်ပေးစေချင်ပါတယ်ရှင့် ဆရာညွှန်ကြားသလို treatment ယူပါ့မယ်ရှင့် ၂။ ဆရာရှင့် အမျိုးသားက ၄၈ထဲမှာ ဆံပင်အကွက်ကျွတ်လို့ ဘာဖြစ်တာလဲ ဆိုတာပြောပြပေးပါနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ ၃။ ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၂၇ နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်မရှိဘူးပါဘူးရှင့်။ ဆံပင်တွေအရမ်းကျွတ်ပြီး ဦးရေပြားမှာ ဗောက်တွေထပါတယ်။ အခုဆိုရင် ဦးရေပြားကအရေခွံတွေကအဖတ်လိုက်တွေကိုကွာပါတယ်။ သိသိသာသာ ဖြစ်လာတာဆိုရင် ၃ နှစ်လောက်ရှိပြီရှင့်။ ခေါင်းလျေ်ပြီးနောက်တစ်ရက်နေရင်ကို ဦးရေပြားယားပြီး ကုတ်လိုက်ရင် အဖတ်လိုက်တွေကွာပါတယ်။ ခေါင်းလျော်ရည်တွေလည်း အမျိုးမျိုးပြောင်းသုံးကြည့်ပါတယ်မရပါဘူးရှင်။ ခေါင်းလျော်ရည်တွေမှာတွေပါတဲ့ chemical ကြောင့်ထင်လို့ တရော်ကင်ပွန်းနဲ ့လျော်ပါတယ်မရပါဘူးရှင့်။ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ဆံပင်ဖြောင့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပိုဆိုးပါတယ်ရှင့် အခုတော့သီလရှင်ဝတ်ပြီးတာကြောင့် ဆံပင်အတိုဖြစ်နေတာတောင် ဆံပင်တွေကျွတ်ပါတယ်။ ဆရာရဲ့ ringworm ဆိုတဲ့ September5ရက်နေ့ကတင်တဲ့ post ကိုဖတ်မိလို့ဒီစာကိုရေးလိုက်တာပါဆရာ။ ဆရာကပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားလို့ကျေ
ခဏခဏမေးကြတယ်။ မေးခွန်း နမူနာသာထည့်ပါမယ်။ ၁။ အမျိုးသမီး အသက် ၃၂ ရာသီမှန် ခင်ပွန်း ့့့။ ဒေါက်တာ ဒီဆေးက ဘာအတွက် ကောင်းတာလဲ ဝက်ခြံကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အမဲစက်ကို လိမ်းတာ အမဲစက်နဲ့ အမာရွတ်တွေကို လိမ်းကြည့်တော့ သက်သာသလို ခံစားရလို့ပါ မျက်နှာမှာ လိမ်းရင် ဆိုးကျိုးများ ရှိနိုင်မလား ၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန်မ အသက် ၂ရနှစ်ရှိပါပြီဆရာ။ ကျွန်မ မျက်နှာမှာ ဓါတ်မတည့် ဖြစ်ပြီး ယားတာ မကြာခဏ အစားမှားရင်ပြန်ဖြစ်တက်တယ် ဆရာ။ ကျွန်မ အစားမှားပြီး မျက်နှာနည်းနည်း စပြီးယားလာပြီဆိုရင် skineal ကို ယားတဲ့နေရာမှာလိမ်းလိုက်ရင် သက်သာသွားပါတယ် ဆရာ။ တချို့က skineal က steroid ပါလို့ မလိမ်းရဘူးပြောပါတယ် ဆရာ။ skineal ကို side effects မရအောင် ဘယ်လိုလိမ်းရမှာလဲ ဆရာ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် skineal ထက်ကောင်းတဲ့ဆေးကို ညွန် (ညွှန်)ပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ။ Skineal စကင်နီရယ်လိမ်းဆေးဆိုတာ Clobetasol Propionate, Ketoconazole and Neomycin Sulphate ဆေးတွေ ရောထားတာဖြစ်တယ်။ ပျောက်နိုင်ခဲတဲ့ နှင်းခူလိုအနာ၊ ဗက်တီးရီးယားသေဆေးနဲ့ ဖန်းဂတ်စ် ခေါ် မှိုဆေးတွေပါနေတယ်။ • Inflammatory skin conditions အရေပြားရောင်ရမ်ခြင်း၊ • Fungal infections ဖတ်းဂတ်စ
၁ဝ။ အဘိရာဇာ၊ ကြေညာလွံ့ပတ်၊ သဒ္ဓဘိဇ္ဇ၊ သျှသျှကနှင့်၊ ယဝန ဗာရာ၊ မုဏ္ဍာလောန၊ ထိုမျှခုနစ်ပါး၊ ဇာတိအားဖြင့်၊ ဆင့်ပွားကြီးငယ်၊ ရှစ်ဆယ်ပြည့်နတ်၊ တယောက်ယုတ်တည့်၊ တအုတ်တအာ၊ နှစ်သချင်္ာလည်း၊ သုံးရာတထောင်၊ ကျော်ခေါင်ပြည့်ဖြိုး၊ လေးဆဲ့ကိုးမှ၊ မင်းမျိုးပေါ်ရာ၊ ဧကာဒသ၊ တရာ့သုံးနှစ်၊ အဆုံးဖြစ်၏၊ ဘုန်းသစ်ဖြိုးဝေ၊ နေသာကီမြို့၊ မင်းတို့ဌာန၊ ပြည်ပူရ၌၊ ယဝနမင်း၊ အရင်းချီငေါ်၊ ဗြဝိရော်ဟု၊ မင်းကျော်ဘုန်းဖျား၊ ဆယ်ပါးလည်းကောင်း၊ နှစ်ပေါင်းတရာ၊ စွန်းပါခြောက်စု၊ ရတုနန်းပွင့်၊ ထိုမင့်သားမြေး၊ တဝေးတစည်း၊ မင်းချည်းဖြန့်ချိ၊ ပါဋလိက၊ ဘူမိတလာ၊ ဧကလာနှင့်၊ ့့့့့ မှတ်ချက် တစ်ယောက်ယုတ်တည့် မဟုတ်။ တစ်အုတ်တစ်အာ မဟုတ်။ သုံးရာတစ်ထောင် မဟုတ်။ တစ်ရာ့သုံးနှစ် မဟုတ်။ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာ မဟုတ်။ တစ်ဝေးတစ်စည်း မဟုတ်။ ဘူမိတစ်လာ မဟုတ်ပါ။ လေးဆဲ့ကိုးလို့လည်း ရေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ကောင်းမင်းဆက်၊ ဘူမိတစ်လာလို့ရေးတဲ့ခေတ်ဆီ ဦးတည်နေပါသည်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဝင်းလိုက်နှင့် မြို့ဂုဏ်ရောင် ၂ ရုံ တပြိုင်တည်း ခုခေတ် အမြို့မြို့ အနယ်နယ်မှာ(တစ်)ပြိုင်တည်း ဇာတ်ကား ပြသနေပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ ကြိတ်ကြိတ်တိုး။ မျှော်တလင့်လင့်ကိုလည်း စသတ်နဲ့ရေးသူက ရေးနေကြတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
၁။ ကျနော့်ညီက အခု အသက် ၂၁ နှစ်ရှိပါပြီ။ သူက အရမ်းချွေးထွက်သန်ပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းအရမ်းအေးနေချိန်မှာ နောက်ပြီး အဲကွန်းခန်းထဲမှာတောင် ဘာမှမလုပ်ဘဲ ချွေးထွက်နေတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခေါင်း၊ မျက်နှ၊ာ ရင်ဘတ်၊ ကျော၊ လက်ဖဝါးတွေမှာ ချွေးအရမ်းထွက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ သူ့မှာ ချွေးအရမ်းထွက်တဲ့အတွက် တော်တော်တန်တန် ဘယ်မှမထွက်ရဲအောင်ဖြစ်ရပါတယ်။ ခြောက်တန်းနှစ်လောက်က စဖြစ်တာလို့ ပြောပါတယ်။ လမ်းညွှန်ပေးပါဦးဆရာ။ ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာ။ ၂။ ဂျိုင်းနံ့ ပျောက်ကင်းစေဖို့ ဘယ်လိုသုံးရင် အဆင်ပြေနိုင်မလဲ။ လူကြားထဲ သွားလာရတဲ့အခါ အားနာမိလို့ပါ။ ၃။ ဆရာရှင့် ကျွန်မသည် အသက် ၄ဝ။ ကလေး ၂ ယောက်မိခင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယကလေး မီးဖွားချိန်မှစ၍ ချွေး အရမ်းထွက်ပါတယ်။ ကျွန်မ ညအိပ်ချိန် ပိုပြီးချွေးပိုထွက်ပါတယ်။ ခေါင်းချွေးပိုထွက်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့သည် တောင်ပေါ်မြိ့ု အအေးပိုင်းတွင်နေထိုင်ပါသည်။ သို့ပေမဲ့ ကျွန်မသည် ညစဉ်ချွေးအရမ်းပြန်နေပါသည်။ ချွေးထွက်တာကို Perspiration, Transpiration, Diaphoresis ခေါ်တယ်။ အရေပြားမှာရှိတဲ့ ချွေးအိတ်တွေကနေ ရေနဲ့ ဓါတ်ဆားတွေ ထွက်စေတာပါ။ ဦးနှောက်ထဲက Hypothalamus ကနေထိန်းပေးတယ်။ ချွေးထွက်တာက ကောင်းစေဘို့ပါ။ ကိုယ်ပူချိန်
Zongtah ဇောင်းသ ခေါ် မျောက်ငိုသီး
ကွန်မင့်တွေထဲမှာ ပီး ကို ပြီး၊ မှု့ ကို မှု၊ ကြော်၊ ဆူးပုတ် (ဆူးပုပ်)၊ အကြိုး (အကျိုး)၊ တေ (တွေ)၊ စိမ့် (ဆိမ့်)၊ ကျ ကို ကြလို့ ပြင်စရာတွေပါတယ်။ မျောက်ငိုသီး မေးကြတယ်။ နှမ်းဖတ်ချဉ်လည်း မေးကြတယ်။ ကျွန်တော်က မျောက်ငိုသီးကို ပြည်ပထွက်ပြေးတော့မှသာ စားဖူးတယ်။ အခုရေးတာလည်း တဆင့်စကား နှစ်ဆင့်စကား တပည့်ခံပြီးသိတာသာဖြစ်တယ်။ မီဇိုးစကားနဲ့ Zongtah ဇောင်းသလို့ ခေါ်တယ်။ မြန်မာလို မျောက်ငိုတဲ့။ Petai Beans လို့ မလေးစကားနဲ့ခေါ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ချင်းပြည်နယ်နဲ့ ဆက်နေတဲ့နေရာဒေသတေမှာ စားကြတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ အိန္ဒိယမှာလည်း စားသုံးကြတယ်။ ရုက္ခဗေဒလို Parkia speciose လို့ခေါ်တယ်။ အပင်က ပေ ၉ဝ အထိ မြင့်တယ်။ မျောက်ငိုသီးတောင့်က အပြားလိုက် လိမ်ကောက်နေတယ်။ အစိမ်းနု-ရင့်အရောင်ရှိတယ်။ အဆစ်လေးတွေ ပါတယ်။ တဆစ်မှာ အစေ့တစေ့။ တတောင့်မှာ ၇ စေ့၊ ၈ စေ့ပါတယ်။ အနံ့က တညင်းသီးနံ့လိုရတယ်။ အရသာက ဖန်တယ်။ ဆိမ့်တယ်။ အနောက်ဖက် နယ်စပ်ဖြတ်ရင် မြောက်ဖက်က နာဂ၊ အလယ်က မဏိပူနဲ့ တောင်ဖက်က မီဇိုရမ်နဲ့ ထရီပူရပြည်နယ်ကလူတွေ စားကြတယ်။ အနံ့ပြင်းတယ်။ မကြိုက်တဲ့သူတွေ မကြိုက်။ ကြိုက်တဲ့သူတွေက စွဲမက်ကြတယ်။ စားတဲ့နေ့ ရေများများသောက်သင့်တယ်။ နုတ
JE vaccine ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး
ဆရာရှင့် မြန်မာပြည်မှာ ကလ​ေးတ​ွေကို ထိုးပ​ေးတဲ့ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ကာကွယ်ဆေားအမည်လေးသိချင်လို့ပါရှင် သမီးတို့က ခု မနြ်မာပညြ်ကန​ေ Korea ကိုရောက်နေတာပါရှင့် သမီးကို ကာကွယ်ဆေးဒီမှာထိုးဖို့ကို ထိုးပြီးတဲ့ဆေးတွေ record ပ​ေးရတ​ော့ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ကာကွယ်ဆေးနာမည်လေးမ​ေးတော့ မနြ်မာပညြ်ကဆရာမတ​ွေက အမည်မသိလို့ ဆရာ့ကို အကူအညီတောင်းခံတာပါရှင့် Myanmar is using CD-JEV in its Japanese encephalitis campaign and routine immunization program—a vaccine that received WHO prequalification မြန်မာပြည်မှာ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးကို CD-JEV လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်္ဘာလက G6PD နဲ့ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးမေးတာတွေ ခဏခဏဖြေနေရတယ်။ အကုန်လိုက် မဖြေနိုင်တော့ပါ။ ဆောရီး။ ဘလော့မှာလည်း ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းကာကွယ်ဆေးအစီအစဉ်ဆိုတဲ့ ဆခရင်ရှော့ပုံတခုကြောင့် မိဘတွေ ဇဝေဇဝါဖြစ်ကုန်ကြတယ်ထင်ပါတယ်။ ဆောရီး။ အမေရိကမှာတော့ မထိုးရလို့ တားတာမရှိ။ မြန်မာပြည်မှာ တား မတား မသိသေး။ ကာကွယ်ဆေးထိုးဌာန ဆရာဝန်တွေက တားမြစ်ရင် မထိုးသင့်။ တားတာမရှိ ထိုးနိုင်ပါတယ်။ ယူအက်စ်အေ ရောဂါများထိန်ချုပ်ရေးစင်တာနဲ့ ကာကွယ်ဆေးများမထိုး
Covid vaccination ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုး မထိုး ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိကြပါတယ်
မဂ်လာနံနက်ခင်းပါရှင့် ဆရာ ဆရာရှင့် သမီးက ဗိုက်ခွဲထားတာ ၁၀.၈.၂၀၂၁ ရက်နေ့ကပါရှင့် သားအိမ်ဘေးမှာသွေးလုံးတွေရှိလို့ ခွဲလိုက်ရတာပါတယ်ရှင့် အခု ၄.၉. ၂၀၂၁ ရက်နေ့မှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရလားရှင့်ဆရာ သမီးကို ကျေးဇူးပြု၍ဖြေပေးပါရှင့် ကလေးလည်းယူနေသူတယောက်ပါရှင့် ကိုဗစ်ဆေးကြောင့် ကလေးမရမှာတွေစိုးရိမ်လို့ပါရှင့် ခဏခဏ ထပ်ခါထပ်ခါ တင်ပြနေတယ်။ ယူအက်စ်အေမှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို ကိုယ်ဝန်တွေလည်း ထိုးလိုကထိုးနိုင်။ ကလေးနို့တိုက်နေလည်း ထိုးလိုကထိုးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ယူမှာကိုလည်း ရက်နောက်ဆုတ်ထားရန်မလိုပါ။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ကလေးမရဆိုတာ အခုစာရေးနေချိန်အထိ ဘယ်တိုင်းပြည်က သတင်းကိုမှ မတွေ့ဘူးသေးပါ။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်တဲ့သတင်းနဲ့ မူမမှန်ကလေးမွေးဖွားတဲ့သတင်းတွေလည်း ဘယ်တိုင်းပြည်မှ မတွေ့ဘူးသေးပါ။ ၂၅-၈-၂၀၂၁ က ယူအက်စ်အေမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးမထားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တယောက် ကူးစက်ခံရပြီး မိခင်ရော ကလေးပါ ဆုံးသွားတဲ့သတင်း တင်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။ ခိုင်မာတဲ့သတင်းကိုသာ တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုး မထိုးကို ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိကြပါတယ်။ Unvaccinated pregnant nurse, unborn baby die after she contract
နွားနို့သည်တဦး တနေ့တွင်ကို တနေ့တွင်ဟုလည်းကောင်း၊ သစ်ပင်အိုကြီးတပင်ကို သစ်ပင်အိုကြီးတပင်ဟုလည်းကောင်း၊ တစက်ကို တစက်ဟုလည်းကောင်း၊ ပတ္တမြားတလုံးကို ပတ္တမြားတလုံးဟုလည်းကောင်း၊ ရေးသားခဲ့ကြပါသည်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဒေါက်တာသက်ရှေ ခေတ်ဟောင်းရုပ်ရှင်ကားတခု ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်မှာတော့ ကြယ်နီကြီးတစ်ပွင့် တဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲလိုနောက်ပေါ်ကားမျိုးကို လက်မှတ် အလကားရလည်း သွားကြည့်မှာ မဟုတ်ပါ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ပုံအတွက် ကျေးဇူး။
Valvular heart disease နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါ
Valvular heart disease နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါဆိုတာ မွေးကတည်းလဲပါလာနိုင်သလို နောက်မှလဲပျက်စီးနိုင်တယ်။ (၁) Rheumatic fever (ရူမက်တစ်) လေးဘက်နာ၊ (၂) Infectious endocarditis နှလုံးအတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ (၃) Connective tissue disorders တွယ်ဆက် (တစ်ရှူး) ရောဂါ၊ (၄) ဆေးဝါးတွေနဲ့ ကင်ဆာဓါတ်ကင်တာတွေကြောင့် ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ နှလုံးအဆို့ရှင်မကောင်းတာမှာ (၁) Valvular stenosis = အဆို့ရှင်ကျဉ်းခြင်း။ အဆို့ရှင် (၄) ခုလုံးမှာဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ့်မှာဘယ်ဟာလည်းသိပါ။ tricuspid stenosis, pulmonic stenosis, mitral stenosis or aortic stenosis လေးခုရှိတယ်။ (၂) Valvular insufficiency = အဆို့ရှင်မလုံတာ။ tricuspid regurgitation, pulmonary regurgitation, mitral regurgitation or aortic regurgitation လည်းရှိတယ်။ ခံစားရမှာတွေက အားယုတ်၊ အသက်ရှူမဝ၊ နှလုံးကို နားထောင်ရင် အသံမူမမှန်၊ ခြေထောက်ရောင်၊ ရင်ပတ်နာ၊ သတိလစ်တာတွေ ခံစားရမယ်။ နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါများကုသခြင်း (က) ဆေးပေးခြင်း၊ Vasodilators သွေးကြောကျယ်ဆေး၊ ကိုလက်စထောကျဆေး၊ Diuretics ဆီးဆေးနဲ့ Blood-thinning medications သွေးမခဲဆေးတွေပေးမယ်။ (ခ) Balloon valvuloplasty လေဘူဘောင
Reclide 60 MG Tablet ဆီးချိုဆေး
Reclide mr 60 ကဆီးချိုကျဆေးလားဆရာ ဆီးချိုဆေး ဖြစ်ပါတယ်။ စားဆေး။ စမ်းသပ် ကုသပေးတဲ့ဆရာဝန်ညွှန်တဲ့အတိုင်း သောက်ရမယ်။ Reclide 60 MG Tablet MR is an oral antidiabetic medication used to control the blood glucose levels in type-2 diabetes mellitus. It may be used along with Insulin or other medicines in order to achieve better control over the blood sugar levels. Patients are advised to maintainastrict exercise and diet regimen along with this medicine to get the best possible effect. Reclide 30 MG Tablet MR Reclide 40 MG Tablet Reclide 60 MG Tablet XR Reclide 80 MG Tablet Side effects ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုများ Dizziness Nausea or vomiting Confusion Weakness Sweating Changes in vision Decreased heartbeat Abdominal pain Constipation Skin rash Elevated liver enzymes ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
How the heart works နှလုံး ဘယ်လို အလုပ်လုပ်နေသလဲ
• Heart နှလုံးဆိုတာ ကြွက်သားနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ Pump (ပန့်ပ်) စုပ်စက်လေးနဲ့ တူတယ်။ • လက်သီးဆုပ်လောက်ရှိတယ်။ ရင်ပတ်အလည်မှာ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ ပိုများများရောက်နေတယ်။ • တကိုယ်လုံးကို သွေးဟောင်းကနေ သွေးသစ်ရအောင် အဆုပ်နဲ့တွဲ အလုပ်လုပ်တယ်။ သူ့ကိုယ်သူအတွက်လဲ သွေးသန့်ပေးနိုင်တဲ့ သွေးကြောစနစ်ရှိတယ်။ • အထက် (၂) ခန်း၊ အောက် (၂) ခန်း၊ ပေါင်း (၄) ခန်း ပါတယ်။ အထက်ခန်းတွေဟာ သွေးလက်ခံယူကြပြီး အောက်ခန်းတွေက သွေးတွေကို လိုတဲ့ဆီ သူ့ကြွက်သားတွေကို ညှစ်ပြီးပို့ပေးတယ်။ • ညာ-အပေါ်ခန်းမှာ တကိုယ်လုံးက သွေးအဟောင်းမှန်သမျှ စီးဝင်လာတာကို လက်ခံယူပြီး၊ သူ့အောက်က ညာ-အောက်ခန်းကို အဆို့ရှင်ကနေ ဖြတ်သွားစေတယ်။ • ညာ-အောက်ခန်း ကနေ ညှစ်ထုတ်ရင် သွေးဟောင်းတွေက အဆုပ်ဆီရောက်တယ်။ အဆုပ်မှာ အသက်ရှူတဲ့လေထဲက အောက်စီဂျင်ကို အသုံးပြုပြီး သွေးဟောင်းတွေကနေ သွေးကောင်းတွေ ဖြစ်လာစေတယ်။ • သွေးသန့်တွေက တခါ နှလုံး ဘယ်-အထက်ခန်း ထဲကို ဝင်လာမယ်။ • နောက် ဘယ်-အောက်ခန်းထဲကို အဆို့ရှင်ကို ဖြတ်ဝင်လာတယ်။ အဲဒီကနေမှ နောက်ဆုံး ဘယ်-အောက်ခန်း ကြွက်သားတွေ ညှစ်ပြီး တကိုယ်လုံးကို သွေးသန့်တွေ ပို့ပေးလိုက်တော့တယ်။ • နှလုံးညာအခြမ်း နဲ့ ဘယ်အခြမ်းကြားမှာ အကန့်နဲ့ခ
Complications of heart disease include နှလုံးရောဂါကနေ ဆက်ဖြစ်နိုင်တာတွေ
၁။ Heart failure နှလုံး အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်း၊ အဖြစ်များတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာကနေ လိုသလောက် လိုက်မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေ ဖြစ်တယ်။ ကောင်းနေတဲ့ နှလုံးကိုက ကြာရင် အားနည်းလာတယ်။ နှလုံးအောက်ခန်းတွေက တင်းမာလာမယ်။ ကျယ်လာမယ်။ ကြွက်သားတွေ ပြော့လာမယ်။ ရောဂါတွေထဲက Heart defects, Cardiovascular disease, Valvular heart disease, Heart infections နဲ့ Cardiomyopathy တွေကနေ ဖြစ်စေမယ်။ ၂။ Heart attack နှလုံး (အတက်ခ်) ရခြင်း၊ Coronary artery disease နှလုံးကိုသွေးပို့ပေးနေတဲ့ (ကိုရိုနရီ) သွေးလွှတ်ကြောမကောင်းလို့ဖြစ်ရတယ်။ အများဆုံးက သွေးခဲလေးတွေကနေ လာပိတ်တာ။ ၃။ Stroke (စထုပ်ခ်) ရခြင်း၊ ဦးနှောက်ကို သွေးလုံလောက်အောင်မရလိုဖြစ်တာမို့ Ischemic stroke သွေးမဝလို့ရတာလို့လဲခေါ်တယ်။ အရေးပေါ်ဖြစ်တယ်။ ၄။ Aneurysm (အင်ညူရဇင်) သွေးလွှတ်ကြောဖေါင်းခြင်း၊ တကိုယ်လုံး ဘယ်နေရာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်။ သွေးလွှတ်ကြောဖေါင်းရာကနေ ပေါက်ထွက်နိုင်တယ်။ ကိုယ်ထဲမှာ သွေးတွေယိုပြီး အသက် ဆုံးပါးစေနိုင်တယ်။ ၅။ Peripheral artery disease အဖျားပိုင်း သွေးလွှတ်ကြောရောဂါ၊ Atherosclerosis သွေးလွှတ်ကြောလေးတွေမာနေတာက ဆက်ဖြစ်တယ်။ ခြေထောက်မှာအဖြစ်များတယ်။
Oxygen Flow Rate အောက်စီဂျင် ပေးရတဲ့နှုန်း
မင်္ဂလာပါ ဆရာခင်ဗျား အောက်ဆီဂျင် 90 အောက်ကျနေတဲ့ ကိုဗစ်လူနာကို အနည်းဆုံး အောက်ဆီဂျင် ဘယ်လောက်အထိတက်အောင် အောက်ဆီဂျင်ပေးထားရမလဲ Flow rate ကိုနံပါတ်ဘယ်လောက်မှာ ထားသင့်ပါသလဲ အောက်ဆီဂျင် က ဘယ်လောက် % အနည်းဆုံးရှိမှ ကိုယ်တွင်း ကလီစာတွေက ပုံမှန် အလုပ် လုပ်နိုင်မလဲ အောက်ဆီဂျင်ကို လိုတာထက် ပိုပေးမိရင် အဆုတ်ကွဲပြီး အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ကိုဗစ်လူနာနဲ့အောက်ဆီဂျင် အကြောင်းလေး အဆင်ပြေရင် ရေးတင်ပေးပါ ခင်ဗျား မကြာခဏတင်ထားတယ်။ ထပ်လည်း တင်တယ်။ ကြာပြီ။ Oxygen concentrator အောက်စီဂျင်များအောင်လုပ်ပေးသောစက် https://dr-tint-swe.blogspot.com/2021/07/oxygen-concentrator.html Oxygen Flow Rate အောက်စီဂျင် ပေးရတဲ့နှုန်း https://dr-tint-swe.blogspot.com/.../oxygen-flow-rate.html Oxygen Poisoning အောက်စီဂျင်များလွန်းတာ မကောင်းပါ https://dr-tint-swe.blogspot.com/2021/08/oxygen-poisoning.html Oxygen Therapy အောက်စီဂျင်ပေးခြင်း https://dr-tint-swe.blogspot.com/2021/06/oxygen-therapy.html Oxygen အောက်စီဂျင် https://dr-tint-swe.blogspot.com/2021/07/oxygen.html Oxygen အောက်စီဂျင် မေးခွန်း https://dr-tin
တ ၏ လွတ်လပ်မှု ပျောက်ဆုံးခြင်း
တကျိုက် နှစ်ကျိုက် ဖျာတချပ်စာ အပြာကွက်တကွင်း တိုက်ပွဲတထောင် အောင်ပွဲတသိန်း (မောင်စွမ်းရည်) ခုခေတ်မှာ ခုခေတ် ကဗျာထဲက တ မှန်သမျှ စသတ်ခြင်းခံရပါတော့တယ်။ ပို့ပေးသူ ကျေးဇူး။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
တသင်းတသင်းရယ်နဲ့ တဝင်းဝင်းတဝါဝါ တနှစ်မှာသည်တလ တလ၌ တရက်သာ ဒို့တတွေ လက်ရေချိုးကာ အေးလှတကား (မောင်ရည်မှန်း) ခုခေတ် ကဗျာထဲက တ မှန်သမျှ စသတ်ခြင်းခံရပါတော့တယ်။ ပို့ပေးသူ ကျေးဇူး။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဆရာဝန်တဦးက တခြားဆရာဝန်တဦးရေးတာကို တဆင့်တင်ပြထားတာ ပါ်လစီသတ်ပုံဖြစ်နေတယ်။ ခေတ်မီဆေးပညာဖခင်ကြီး Greek physician Hippocrates က (460–370 BC) မှာပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ ပဋိညာဉ်ကို ဂရိလိုရေးတယ်။ အခုထိ ဂရိစာကို စာလုံးတွေမပြင်ပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တာလည်း ရာစုနှစ်တွေကြာပြီ။ စပယ်လင်မပြင်ကြပါ။ မြန်မာလို ဘာသာပြန်တယ်။ သတ်ပုံပြင်ကြတယ်။ အဲလိုလုပ်တာ မြန်မာတနိုင်ငံတည်းမှာသာရှိတယ်။ ဂုဏ်ယူကြပါသလော။ အောက်က ပဋိညာဉ်က ကျွန်တော်ဘာသာပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ မူကွဲတွေများတယ်။ ဟစ်ပိုခရေးတီးစ် ပဋိညာဉ် • I promise that my medical knowledge will be used to benefit people’s health; patients are my first concern. I will listen to them, and provide the best care I can. I will be honest, respectful, and compassionate towards them. • ကျွန်ုပ်၏ ဆေးပညာသည် လူတို့၏ အကျိုးစီးပွါးအတွက် အသုံးချပါမည်ကို ကတိပေးပါသည်။ လူနာသည် ပဌမ ဦးစားပေး ဖြစ်သည်။ သူတို့ပြောသည်ကို နားထောင်၍ တတ်စွမ်းသရွေ့ စောင့်ရှောက်ပါမည်။ ရိုးသားသော ကရုဏာဖြင့် လေးစားခြင်းကို ရယူပါမည်။ • I will do my best to help anyone in medical need, in emergencies. I will make every effor
Burma News Network မနေ့က အင်တာဗျူး
“PDF Concepts ဟာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ လုံး၀ အသစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်” (၃၁/၈၂၀၂၁) ရရာလက်နက်စွဲကိုင်ပြီး စစ်အာဏာရှင်ကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လက်ရှိ PDF လူငယ်တွေရဲ့ စဉ်းစားချက်ဟာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ လုံး၀ အတွေးအခေါ်အယူအဆသစ်တခုဖြစ်တယ်လို့ ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားတဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာတင့်ဆွေက ပြောပါတယ်။ စစ်အာဏာသိမ်းမှု ၇ လပြည့်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနက မေးမြန်းစဉ် သူက အဲဒီလိုပြောခဲ့တာပါ။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ NCG ဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူ ဒေါက်တာတင့်ဆွေနဲ့ မေးမြန်းချက် အပြည့်အစုံကိုတော့ မနက်ဖန် ညပိုင်းမှာ ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
Epinephrine injection ကိုယ်တိုင်ဆောင်ထားလည်းရတယ်
ဖြေထားတာတွေကို အခါ ၂၀ ကျော် တင်ပြပြီး။ မင်္ဂလာပါ ဆရာရှင့် ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးကို အလာဂျီဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်ဖူးသူ မထိုးသင့်ဘူးလို့ ဆရာရေးထားတာဖတ်ရပါတယ်ရှင့်။ အစ်မဖြစ်သူက အသက် ၃၈ နှစ်လောက်က စပြီး ၂ နှစ်ကြာ ၃နှစ်ကြာလောက်ဆို အင်ပြင်လိုအပိန်းပိန်းတေ (အပိန်းပိန်းတွေ) ပိန်းပိန်းတေ (ပိန်းပိန်းတွေ) ထွက်ဖူးပါတယ် တကိုယ်လုံးထွက်ပြီးသွားမှ သူအလိုလိုပြေပြေသွားပြီး ကောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ အခုအသက်က ၅၆ ရှိပါပြီး အင်ပြင်လို အပိန်းပိန်းတွေ မထွက်တာ ၅ နှစ် လောက်ရှိပါပြီး။ အခု ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ ရ မရ သိခြင်(သိချင်)လို့ပါ ဆရာရှင့်။ ဆရာ့ကို အားကိုးပါတယ်ရှင့်။ အင်ဂျက်ရှင် ခေါ် ထိုးဆေး ထိုးပေးသူတိုင်းဆီမှာ ဖြေဆေး ခေါ် အလာဂျီ ခေါ် အနာဖလက်စစ် ခေါ် ဆေးမတည့်လို့ ရှော့ခ် ဖြစ်တာကို ကုသတဲ့ဆေး အဆင်သင့်ရှိရမယ်။ EPI Pen က ယူအက်စ်အေမှ ရတယ်။ ဆေးစျေးကြီးတယ်။ ကျန်တာက ဘယ်နိုင်မှာမဆို ရတယ်။ အလွန်စျေးချိုတယ်။ Epinephrine injection ကိုယ်တိုင်ဆောင်ထားလည်းရတယ်။ ဆေးသက်တမ်းလွန်ရက်စွဲသာ သတိထားပါ။ ရယ်ဒီမိတ် ခေါ် တခါတည်းထိုးလို့ရတာ ဝယ်မရရင် ၂ စီစီ (2 cc) ဆေးထိုးအပ်တချောင်းလည်း ဆောင်ထားပါ။ ဆေးက 0.3 - 0.5 ml (cc) သာ လိုတယ်။ EPI Pen ကာကွယ
Symptoms of COVID-19 ကိုဗစ် ရောဂါလက္ခဏာများ
ဆရာ မဂ်လာပါခင်ဗျာ Updated Covid symptom က ကြို့ထိုး(မရပ်မနား) ဆိုတာဟုတ်ပါသလားဆရာ အခုစာရေးနေတဲ့အချိန်ထိ WHO နဲ့ အမေရိကန် CDC ဝဘ်ဆိုက်တွေမှာ အပြောင်းအလဲ မရှိပါ။ WHO last updated on 13 August 2021 The most common symptoms of COVID-19 are fever, dry cough, and tiredness, loss of taste or smell, aches and pains, headache, sore throat, nasal congestion, red eyes, diarrhoea, oraskin rash. CDC Symptoms of COVID-19 Updated Feb. 22, 2021 Fever or chills Cough Shortness of breath or difficulty breathing Fatigue Muscle or body aches Headache New loss of taste or smell Sore throat Congestion or runny nose Nausea or vomiting Diarrhea ကိုဗစ် ရောဂါလက္ခဏာတွေ • ဖျား၊ ချမ်း၊ • ချောင်းဆိုး၊ • အသက်ရှူမဝ၊ • အားနည်း၊ • လည်ချောင်းနာ၊ • နှာရည်ယို၊ • ကြွက်သား ကိုယ်လက် ကိုက်ခဲ၊ • ခေါင်းကိုက်၊ • အန် ဝမ်းပျက်။ • အနံနဲ့ အရသာပျက်ခြင်း ပျောက်ခြင်း။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၃၁-၈-၂၀၂၁
ဖရင်းထဲကတယောက်က စာရိုက်တာ မှားလို့ ပြင်လိုက်တယ်။ ဘာဝနာရေးတာ ဘဝနာဖြစ်နေလို့။ တစ်ကိုတော့ မပြောတော့ပါ။ ကျွန်တော်လည်း မှားတယ်။ ကိုယ့်နာမည်တောင် မှားရိုက်မိတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တ ကို တော့ တစ်မလုပ်မိပါ။ တင်းနစ်ကစားစဉ်က ဆရာတယောက်ကလာပြီး သင်ပြပါတယ်။ ဆားဗစ်ပေးတဲ့အခါ တင်းနစ်ဘောလုံးကို နဖူးပေါ်တည့်တည့်မြှောက်ပြီး အမြင့်ဆုံးနေရာကနေ ရက်ကက်နဲ့ ရိုက်ပါတဲ့။ သင်တန်းဆရာက လက်သား သေနေလို့ နဖူးပေါ်တည့်တည့်ကိုသာ ဘောလုံးကို မြှောက်မိပြီး လွဲအောင်မြှောက်မရတာ သတိထားမိတယ်။ ပုလဲမှာ မြို့နယ်ဆရာဝန်လုပ်စဉ်က။ သူငယ်တန်းကတည်းက တခုကို တခု၊ တယောက်ကိုတယောက်လို့သာ အခုထိ ရေးပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ တစ်ရေးတာ လက်သေနေကြပြီ။ ဘာဝနာတည်း။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဆရာခင်ဗျား ယနေ့ထုတ် သတင်းစာမှာ သုံးထားသည့် အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ မှာ တစ် လို့ သုံးထားတာ မှန်ပါသလားခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့သည် ဘယ်သောအခါမကမှ တပြေးညီ မဖြစ်ခဲ့ပါ။ ဆင်းရဲကြသည်။ ချမ်းသာကြသည်။ စာတတ်ကြသည်။ စာမတတ်ကြပါ။ ဘုရင်တွေလက်ထက်မှာ နန်းတော်ထဲမှာ ခစားရသူတွေ၊ ကျေးရွာဇနပုဒ် နယ်စွန်နယ်ဖျားမှာ နေရသူတွေ မတူခဲ့ပါ။ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ၁၄ နှစ်ကြာ သည်အတိုင်းသာ။ အဲတာနဲ့ ဗခက နေဝင်းအာဏာသိမ်းတော့ ဆိုရှယ်လစ်ဖြစ်လာတယ်။ အားလုံးတပြေးညီစေရမယ်တဲ့ လောကနိဗ္ဗာန်တည်ဆောက်တယ်။ ပါတီဝင်နဲ့ ပါတီမဝင်တော့ မတူ။ တင်းပြည့်နဲ့ အရန်မတူ။ စာရေးနေကြတာ တယောက်တမျိုး။ တပြေးညီစေရမယ်လို့ လမ်းညွှန်တယ်။ မူကွဲ မရှိစေရ။ သတ်ပုံကျမ်းသစ် ထုတ်စေ။ အပြီးမသတ်လိုက်ပါ။ ၂၅ နှစ် ကြာတော့ အယ်လ်ဒီစီ တိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တနှစ်ကြာတော့ ပြိုကွဲရော။ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်ကို ရယ်စရာ ပြောကြတယ်။ လက်ငါးချောင်းကို ညီစေအောင် ရှည်နေတာတွေ ဖြတ်တဲ့။ နောက်စစ်အစိုးရက ပိုစွမ်းတယ်။ သတ်ပုံကျမ်းသစ် ၁၉၉၁ မှာ ထုတ်နိုင်တယ်။ ဆိုရှယ်လစ်လိုမဟုတ်။ တတွေကို ဆွဲဆန့်ပေးပါတယ်။ လက်သုံးလုံးစာ စာအုပ်ကို ပြန်ထုတ်တော့ လက်လေးလုံးစာဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီ တပြေးညီ သတ်ပုံကျမ်းကတော့ ကနေ့အထိ အသက်ဝင်တယ်။ ပဌမ မ
အိုက်စကရင်းတခွက် ပို့ပေးသူ ကျေးဇူး။ အရင်ကလည်း တင်ပြထားပါတယ်။ ခုခေတ် အယ်ဒီတာတွေ၊ မြန်မာစာဆရာတွေ၊ စာရေးဆရာတွေနဲ့ ကဗျာဆရာတွေက ဗန်းမော်တင်အောင် သတ်ပုံမှားတယ်လို့ ထောက်ပြနေကြတယ်။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ဆရာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားသူက ဘာတွေရှောင်သင့်လဲခင်ဗျ Online မှာပြောသလိုဆေးထိုးပြီးသားသူက အရက်ဘီယာ သောက်ရင်ရော ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲခင်ဗျ မမေးဖူးလို့ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါဗျ ဆရာဝန်က အဲလိုမရေးပါ။ အရက် ဘီယာဆိုတာ အထွေထွေကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းကျိုးတွေ ဖြစ်စေတာတော့ ဆရာဝန်မပြောလည်း သိပါမယ်။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူတွေလည်း ကိုဗစ်ကာကွယ်နည်းစည်းကမ်းတွေ ဆက်ပြီးလိုက်နာနေရမယ်။ လူဦးရေရဲ့ အနည်းဆုံး ၇၀% ကာကွယ်ဆေးထိုးထားမှသာ ပုံမှန်နီးပါးပြန်ရောက်နိုင်တယ်။ မျိုးကွဲသစ်တွေကလည်း ဆက်ဖြစ်နေတယ်။ အွန်လိုင်းမှာရေးတိုင်းသာ မှန်တယ်ဆိုရင် ပဒေသာပင်ကြီးပေါက်ပြီး လူတိုင်းချမ်းသာနေကြပြီ။ အွန်လိုင်းကရေးတိုင်းသာ မှန်တယ်ဆိုရင် လူတွေ စားစရာတခုမှရှိတော့မှာ မဟုတ်။ အွန်လိုင်းမှာရေးတိုင်းသာ မှန်တယ်ဆိုရင် ရောဂါမှန်သမျှ ၉၆ သိန်း ပျောက်ဆေးတွေ့မယ်။ အွန်လိုင်းမှာရေးတိုင်းသာ မှန်တယ်ဆိုရင် ကိုဗစ်ပျောက်ဆေး အမျိုးပေါင်း လေးသင်္ချေတွေ့မယ်။ Dr. တင့်ဆွေ
Prothrombin time များနေတယ်
မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်တော်က နှလုံးအစို့ရှင် (အဆို့ရှင်)နှစ်ခု လဲထားပါတယ်။ အသက်က ၂၈ ပါ။ ယောက်ကျားလေးပါဆရာ။ ပြနေကြ(ပြနေကျ) ဆရာဝန်တွေနဲ့ပြဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေလို့ ဆေးခန်းမပြပဲ သောက်နေကြဆေးကိုပဲဝယ်သောက်နေတာ လတော်တော်ကြာပါပြီ။ တလတခါလောက်တော့ INR စစ်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအဖြေလေးကြည့်ပြီး လိုအပ်တာညွှန်ကြားပေးဖို့တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ဆရာ။ သောက်နေကြ(သောက်နေကျ) ဆေးတွေပါဆရာ။ Aldactone မနက် ၁ Cardivas 3.125 မနက် ၁ / ည ၁ Penicillin V 250mg မနက် ၁ / ည ၁ Maforan (warfarin sodium4mg ) ညနေ၅နာရီ ဆေးစစ်ချက်အရ PT (prothrombin time) များနေတယ်။ Normal Values for Coagulation Tests There isanormal range of values in coagulation studies for people who are not taking blood thinners. These ranges differ from the target values whenaperson is takingablood thinner. Normal Values for Coagulation Tests TEST NORMAL RANGES PT 10-12 seconds (မေးတဲ့သူ) = 30.7 sec PTT 30-45 seconds INR 1:2 ratio For people not on blood thinners Blood thinners and anticoagulants will make blood take longer to clot. If you are tak
COVID-19 Infection and Vaccine ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးသူနှင့် ကာကွယ်ဆေး မေးခွန်းများ
၁။ ဆရာရှင့် Covit 19 ဖြစ်ပြီးဘယ်လောက်ခြားပြီးမှကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရလဲရှင့် ၂။ ဆရာကျွန်မအသက် ၃၇ နှစ်ပါ။ ခု covid တတိယလှိုင်းမှာကျွန်မ covid ဖြစ်ပါတယ်။ ခုတော့ပြန်ကောင်းလာပါပြီရှင်။ ကျွန်မသိချင်တာက covid ဖြစ်ထားတဲ့လူက ကာကွယ်ဆေးကိုဖြစ်ပြီး ဘယ်နှလ (နှစ်လ) နေမှ ထိုးလို့ရတာလဲ ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတာနဲ့ ချက်ချင်းထိုးလို့ရ မရ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ၃။ ဆရာရှင့် COVID Positive ဖြစ်ပြီးတာ ဖြစ်တဲ့နေ့ကစရေတွက်ရင် ယနေ့ဆို ၁လနဲ့ ၉ရက်ရှိပါပြီ Antibody လည်းထွက်ပါပြီ ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ ရမရသိချင်လို့ပါရှင့် ၄။ မင်္ဂလာပါ ဆရာခင်ဗျာ့ Covid ဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ဆေးက (၆) လကြာမှ ထိုးရတာပါလား ခင်ဗျာ ၅။ ဆရာ covid ကွာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်ပီး (ပတ်သက်ပြီး) မေးချင်လို့ပါဗျ Covid positive ဖြစ်ပီး (ဖြစ်ပြီး) ဘယ်နှစ်လကြာမှ ကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့်ပါသလဲ ကျွန်တော်က covid positive ဖြစ်တာ တစ်လ (တလ) ကျော်ပါပီ (ကျော်ပါပြီ) တရုတ်ထုတ် Sinophram ကာကွယ်ဆေး ထိုးလို့ရပါသလား အခုထိုးမယ်ဆိုရင် ၆။ ဆရာ ကိုဗစ်ဖြစ်ပီး(ပြီး)တဲ့လူက ဘယ်လောက်ကြာမှ ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရပါလဲ။ ၇။ ဆရာရှင့် အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါရှင့် covid ဖြစ်နေတာမသိဘဲ ကာကွယ်ဆေးထိုးမိရင် ဆိုးကျိုးရှ
Message inaBottle ပုလင်းနဲ့လာတဲ့စာ
ဖရင်း မဟုတ်သေးသူတွေဆီကနေ မက်စင်ဂျာကနေလာတဲ့ မက်ဆေ့ချ်တွေကို Filter messages လို့ခေါ်တယ်။ အဲတာတွေရှိနေတာ သိလာတာ မကြာသေးပါ။ သိကတည်းက စစ်ပြီး Accept လုပ်ရတယ်။ ဖြေသင့်တာတွေ ဖြေပါတယ်။ တချို့ရေးထားတာတွေက နှစ်ကျော်ကြာပြီ။ အဲလိုလုပ်ရကောင်းမှန်းသိစက ဖုန်းကိုအရင်ဖွင့်ပြီး Accept လုပ်ရတယ်။ အကြွေးတွေဆပ်ရတယ်။ ထောင်ဂဏန်းကျော်တယ်။ မနေ့ကစပြီး ကွန်ပြူတာကနေ လုပ်တတ်လာတယ်။ နည်းတာမဟုတ်။ ကျွန်တော့်မှာ ဖေ့စ်ဘွတ်က ၂ ခုနဲ့ Page တခုဆိုတော့ လက်အတော်ဝင်တယ်။ နောက်ပြန်ရှာပြီးဖြေနေပါတယ်။ အကြွေးတွေ။ ရှေးတုန်းက ပင်လယ်ခရီးသွားသင်္ဘောပေါ်ကနေ အလုံပိတ်ပုလင်းထဲ စာထည့်ပို့နည်းသုံးခဲ့ကြတယ်။ ရုပ်ရှင်တကားလည်း ရှိတယ်။ ကေဗင် ကော့စ်နာ ပါတယ်။ ကမ်းခြေရောက်လာတဲ့ ပုလင်းထဲကစာရသလိုပဲ သဘောထားပါတယ်။ ဖတ်စရာ ဖြေစရာတွေ ကျန်သေးတယ်။ လုပ်လိုက် နားလိုက်။ ၂၀၁၇ နှစ်ဆန်းရောက်မှာ သိတာ။ မောပြီ။ တချို့လည်း ပြန်မဖြေလို့ စိတ်ဆိုးသွားကြမယ်။ ဆောရီး။ တချို့ ပုလင်းတွေက ခုထိ ပင်လယ်ကြီးထဲမှာ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
စက်တင်္ဘာနာမည်ဟာ Septem (Seven) ကနေ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်။ ရောမပြက္ခဒိန်အရ သတ္တမမြောက်လ ဖြစ်လို့ပါ။ အဲသည်ခေတ်က တနှစ်မှာ (၁ဝ) လသာရှိတယ်။ ဇန္နဝါရီနဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလတွေ မပါသေးပါ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်္ဘာလမှာ မြန်မာပြက္ခဒိန်အရ ၁၃၈၃ ခုနှစ်၊ ဝါခေါင်လဆုပ် (၁၀) ရက်ကနေ တော်သလင်းလဆုပ် (၁၀) ရက်နေ့အထိ ကျရောက်တယ်။ စက်တင်္ဘာလ အထိမ်းအမှတ်နေ့များ • ပဌမတနင်္ဂနွေနေ့ = Grandparents Day အမေရိက နဲ့ ကနေဒါ အဖိုး-အဖွါးများနေ့ • ပဌမတနင်္လာနေ့ = Labor Day (Labour Day) အမေရိက နဲ့ ကနေဒါ အလုပ်သမားနေ့ • တတိယတနင်္လာနေ့ = ဂျပန် သက်ကြီးရွယ်အိုများနေ့ • ၁ ရက်နေ့ = အူဇဘက်ကစ်စတန် လွတ်လပ်ရေးနေ့ • ၂ ရက် = ဗီယက်နမ် အမျိုးသားနေ့ • ၅ ရက် = Teachers’ Day (အိန္ဒိယ) ဆရာများနေ့ • ၇ ရက် = ဘရာဇီးလ် လွတ်လပ်ရေးနေ့ • ၈ ရက်နေ့ = International Literacy Dayနိုင်ငံတကာစာတတ်မြောက်ရေးနေ့ • ၁၃ ရက် = Positive Thinking Day အပြုသဘောဆောင်စဉ်းစားရေးနေ့ • ၁၅ ရက် = အယ်လ်ဆာဗာဒို လွတ်လပ်ရေးနေ့ • ၁၅ ရက် = အမေရိကန် ဟစ်ပင်းနစ် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်နေ့ • ၁၅ ရက် = International Day of Democracy နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့ • ၁၈ ရက် = National Cheeseburger Day ချိစ်ဘာဂါ န